I-Mountain Air Treehouse - I-Airbnb
I-Mountain Air Treehouse
Indlu ekhiwe emthini sinombuki zindwendwe onguSusan & Ernie
USusan & Ernie yi-Superhost
IiHot Springs Treehouses zibonelela ngamava awodwa kwaye anika umdla kwiindwendwe zethu. Khetha kwizindlu zemithi ezintandathu; ngamnye unobuntu bakhe. Izindlu zemithi zibekwe ngokulula kwimizuzu ukusuka ezantsi kwedolophu iHot Springs National Park. Yonwabela imbono yeentaba ngokusebenzisa i-canopy yemithi ngelixa umanzi kwi-tub eshushu. Ngaphakathi uya kuxabisa ibhedi entle yenkosi, ifanitshala ephezulu, indawo yonke yomlilo kunye nekhitshi.
Ejikelezwe ziintaba ze-Ouachita, yiza kwaye ujabulele iqhekeza elincinci lezulu kwi-canopy yemithi. Uya kuwuthanda umbono, ukusebeza okunoxolo kwendalo, ixesha lokuphumla kunye nokukhulula ngokupheleleyo. Ikhitshi encinci (isitovu, akukho oveni) ibonelelwa kweso sidlo sothando okanye ujabulele nje i-snack kwi-veranda. I-grill yegesi inikezelwa. Thatha ixesha lakho kwi-tub eshushu ebekwe kumgangatho okanye wonwabele indawo yomlilo yexesha lonke. I-Mountain Air Treehouses yangaphakathi iqatywe mhlophe kwaye iqatywe ngenkcenkce. Kuyakhanya kwaye kunomoya.
4.96 · Izimvo eziyi-257
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi257
Ijikelezwe ziiNtaba ze-Ouachita, iHot Springs Treehouses ibekwe malunga neekhilomitha ukusuka eCedar Glades Park kunye neNdlela entsha yaseNorthwoods. Kukho iindlela ezininzi kwindawo ekufutshane. I-Downtown Hot Springs National Park yimizuzu emi-5-7 phezu kwentaba, i-Oaklawn Racing nje phezulu kwendlela, iMagic Springs Theme Park ijikeleze i-7 yeemayile, iLake Ouachita ijikeleze i-15 yeemayile kude.
Umbuki zindwendwe ngu- Susan & Ernie
Siyayihlonipha imfihlo yakho kwaye sicele iindwendwe zethu ukuba zihloniphe imfihlo zabanye.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hot Springs